Uphengululo lwencwadi "Como el sol para las flores" ngu-Irene Villa | Uncwadi lwangoku
Uphengululo lwencwadi «Como el sol para las flores» ngu-Irene Villa
Ifoto nguDani Oceans
Ndinayo incwadi iinyanga "Njengelanga leentyatyambo" ngu-Irene Villa epapashwe kwi Inqaku lomhleli uEpasa, kwaye nangona ndayiqala kudala, khange "ndiyibambe" kuyo. Nangona kunjalo, kwaye ndiqala ngale migca imfutshane, enokuthi ibe ngokoluvo lwam, sele ndigqibile ukuyifunda kwaye ndinoluvo olusebenzayo kwincwadi kwaye ndiyithelekisa naleyo bendikhe ndayifunda kumbhali u-Irene Villa .
1 Isishwankathelo kunye nedatha yencwadi
Isishwankathelo kunye nedatha yencwadi
"Njengelanga leentyatyambo" yinoveli isethwe eRainbow, i-NGO ocinga ukuba ijolise ekukhathaleleni abantwana nakwishumi elivisayo abanabazali abangakwaziyo ukubakhathalele kwaye basebenze ukubonelela, kuxhomekeke kwityala, kwiintsapho ezamkelekileyo okanye kumakhaya okhuliso.
UJudith, ophambili Ulawula le NGO, unontlalontle osebenza kwinkqubo yokwamkelwa koluntu oluzimeleyo. Umncinci, unomdla, unamandla kwaye uzinikele emsebenzini wakhe, kangangokuba intshisakalo egqithisileyo inokuba yingxaki enkulu kuye. Iminyaka ubomi bakhe bujolise kuphela emsebenzini wakhe de isigqibo esibuhlungu senze umdlalo omfaka kuxinzelelo kwaye umnyanzele ukuba acinge ngekamva lakhe.
Inani lamaphepha: Amaphepha ayi-304
UMhleli: Iincwadi ze-SLU Espasa
Ixabiso: i-19,90 euro
Kule ncwadi singafumana abalinganiswa abaphambili abaphambili, abanye abalinganiswa besibini kunye nomzobo abantwana abasuka kwiziko lokwamkelwa, ngokoluvo lwam lelona libalaseleyo neliboniswe kwinoveli. Abanye abalinganiswa abaneemeko zokwenyani kwaye ngokwendlela okuchazwa ngayo ukulahlwa okanye "ukucalulwa" ngenxa yezinye iimeko zosapho kwaye ongena kwindlu ngendlu, ngenxa yokuba kunzima kangakanani ukuqhela ikhaya elitsha, kunye usapho olutsha kunye nemithetho emitsha. Ngokukodwa xa ubudala baba bantwana busanda.
Ukuqhubela phambili kumlinganiswa ophambili, uJudith, ngumfazi oqeqeshiweyo kwaye uzinikele kakhulu emsebenzini wakhe njengengcali yeengqondo kwiziko lolutsha. Nakuphi na ukusilela okanye isigqibo esingalunganga kukubuyela umva ekunzima kakhulu ukoyisa ngenxa yobungcali bayo kunye nokugqibelela.
Into ebambe umdla wam kwaye ilungile zizinto ezimbini:
Kukho iziqwenga zeengoma Iqela lomculo laseSpain «Maldita Nerea». Ndiyathanda ukuba ababhali bakhankanye iingoma okanye amagcisa omculo kwiincwadi zabo. Oku kwenza ukuba kwangoko, ukuba andiyazi ingoma, yiya ngokukhawuleza kukhangelo lwayo.
Ekupheleni kwencwadi, kukho ifayile ye- Inqaku elivela kumbhali u-Irene Villa, apho achaza ukuba yaqala njani kwaye kutheni le ncwadi yaqala. KwakuseMallorca, ngokukodwa Isiseko seNazarete, indawo yokuhlala yamakhwenkwe namantombazana apho ngelishwa abazali babo bebengenako ukubanika yonke into abayifunayo. Ndiyawathanda la mava njengabantu ngolu hlobo, asiwa kuncwadi kwaye ngandlela thile adluliselwa ebantwini.
Njengoko besenditshilo ekuqaleni kolu hlaziyo, ndayiqala le ncwadi kwiinyanga ezidlulileyo kodwa Khange ndibambeke ncam ekuyifundeni. Ibilahlekile into yokuba ndiyifunde yonke imihla, njengoko kwenzekile kum nezinye iincwadi, phakathi kwazo kukho enye ka-Irene Villa, "Alikaze lilihle ixesha, nkosazana.". Le yokugqibela yandixhuma kwasekuqaleni ukuya esiphelweni. Ke "Njengelanga leentyatyambo" Kudala ndiyifunda ngamanye amaxesha, kwaye phakathi kokunye ukufundwa.
Andikuthandi ukunika ibakala ezincwadini, kuba kubonakala kum ngathi ukufunda kuthotyelwe ngokupheleleyo kuluvo lomntu ngamnye (endinokukuthanda akufuneki kuthandwe nguwe kwaye kungenjalo), kodwa andikwazi ukukhulelwa uphononongo ngaphandle ingqalelo injalo ke eyam 3 / 5.
Ndikucebisa ukuba uyifunde ukuba uthanda iincwadi ezinomxholo olayishwe ngabantu kunye neemvakalelo, amabali anzima onokuhlala ufumana into elungileyo nefanelekileyo. Ukuba kwelinye icala ujonge into enzulu, ndiyacebisa ngokuchasene nayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Uphengululo lwencwadi «Como el sol para las flores» ngu-Irene Villa
Inqaku elibhalwe nguHarper Lee kumaphephancwadi e-FBI lafunyanwa